Shir -weynaha Harooyinka Weyn wuxuu banneeyay waxbarashada nabadda ee dugsiyada (Uganda) - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
September 15, 2021 Warbixinnada Waxqabadka, Siyaasadda 0
Carruurtu waxay dhigtaan cashar idaacadda ku yaal Degmada Ntungamo bishii Juun ee sannadkii hore. Daneeyayaashu waxay leeyihiin dawladda waa inay barashada nabadda ku soo bandhigtaa dugsiyada si horumarka iyo dadnimadu u yeeshaan saldhig adag. (Sawir: Kormeeraha/Faylka Maalinlaha ah)
“Tani waa hindisaha ugu horreeya ee ah in waxbarashada nabadda lagu daro manhajka qaranka. Ujeeddadu waa in lagu daro waxbarashada nabadda maaddo ahaan. ”
Waxaa qoray Franklin Draku
(Waxaa daabacay: Kormeeraha Maalinlaha ah. Sebtember 9, 2021)
Shirka Caalamiga ah ee Gobolka Harooyinka Weyn ayaa ka codsaday Wasaaradda Waxbarashada iyo Xarunta Horumarinta Manaahijta Qaranka in waxbarashada nabadda lagu daro manhajka qaranka.
Mas'uuliyiinta hay'adda gobolka ayaa sharraxay in waddanku uu soo saari karo oo keliya mas'uuliyiin mas'uul ah oo nabadda jecel haddii waxbarashada nabadda la gaarsiiyo bartayaasha isla marka laga bilaabo carruurnimada hore.
Waxay kaloo dhahaan habka goos gooska ah ee hadda jira kuma filna.
Mar ay Margaret Kebisi, oo ah madaxa nabadgelyada iyo amniga gobolka ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda, u furtay tababar soconaya saddex maalmood oo loogu talagalay barayaasha nabadda ee Kampala shalay, ayay Margaret Kebisi, madaxa nabadgelyada iyo amniga gobolka ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda, u sheegtay ergooyinka in ay qasab ku tahay in ay ku barbaariyaan dhaqanka nabadda iyo amniga dhallinyarada in horumarka iyo dadnimadu leeyihiin sal adag.
“Nabad la’aan iyo nabadgelyo ka jirta gobolka, wax kasta oo kale sida horumarka iyo mashaariicda kale ma kici karaan maxaa yeelay nabaddu waa laf -dhabarka horumarka,” ayay tiri.
Waxay sheegtay in dalku uu marayo marxalado qallafsan sababta oo ah ahmiyad badan lama siinin sidii nabadda iyo amniga loogu dhex dhalin lahaa muwaadiniinta da 'yarta ah.
“Tani waa hindisaha ugu horreeya ee ah in waxbarashada nabadda lagu daro manhajka qaranka. Bartilmaameedku waa in lagu daro waxbarashada nabadda maaddo ahaan, ”ayay tiri.
Mr Duncan Mugume, oo ah khabiirka waxbarashada nabadda ee qaranka, ayaa sheegay 10 -kii bilood ee ugu dambeeyay tan iyo markii la bilaabay mashruuca waxbarashada nabadda, in xoogga la saaray sidii la isugu keeni lahaa dhammaan daneeyayaasha. Tani, ayuu raaciyay, waxaa loo sameeyay si loo hubiyo inay jiraan khubaro qaran oo laga soo dheegto.
Macallimiinta dugsiyada hoose iyo sare iyo machadyada sare ayaa ka mid ah kuwa loo qoondeeyay inay qaataan gogosha waxbarashada nabadda.
“Waxaan hore u haysannay ilaa 20 jilaayaal nabadeed iyo daneeyeyaal kale oo aan isu keennay, laakiin weli waxaan ku daraynaa wax badan si aan u abuurno gole aan ka bilowno inaan ka hadalno waxbarashada nabadda oo hadda, waxaan sameyneynaa tababar si aan mid mid uga wada hadalno aragtida iyo u dhaqaaq hal dhinac, ”ayuu yiri.
Mr Mugume ayaa sheegay in daraasado kala duwan ay muujiyeen in caqabadda ugu weyn ee haysata Uganda ay tahay maqnaanshaha waxbarashada nabadda ee manhajka qaranka.
Sidaa darteed wuxuu ku xujeeyay wasaaradda Waxbarashada iyo Xarunta Horumarinta Manaahijta Qaranka inay dedejiyaan geeddi -socodka manhajka waxbarashada nabadda.
“Hadda, markaad eegto carruurteena, qaar badan oo ka mid ah ma yaqaaniin sida looga jawaabo isku dhacyada. Dad badan ma yaqaaniin sida looga gorgortamo waddooyinkooda waana sababta aan u malaynayno inay muhiim tahay in lagu soo bandhigo waxbarashada nabadda… ”ayuu ku soo gabagabeeyay.
# siyaasada waxbarashada
Waxa Aan Illowno 9/11 - Macnaha dhabta ah ee 'Waligaa Ha Iloobin'
Waxbarashada Nabadda ee AFRICA: Qalab aan ahayn Rabshadaha Afrika
Abuuritaanka Mustaqbal Nabadeed: Afarta Sano ee Barnaamijka Barashada Nabadda ee UNICEF
September 1, 2016 Warbixinnada Waxqabadka 0
Barnaamijka Barashada Nabadda ee UNICEF, oo la bilaabay 2012 iyadoo taageero laga helayo Dowladda Netherlands, ayaa gacan ka geysatay horumarinta nabadda iyada oo loo marayo waxbarashada 14 waddan oo ay colaaduhu aafeeyeen: Burundi, Chad, Cote d'Ivoire, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Ethiopia, Liberia , Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, State of Palestine, Uganda, iyo Yemen. [sii wad akhriska…]
New Bangsamoro Sharciga Organic Waxaa ka mid ah Bixinta for Peace Waxbarashada
August 1, 2018 Siyaasadda 0
Bishii Luulyo 27, Madaxweynaha Filibiin wuxuu saxiixay sharciga Bangsamoro Organic Law. Sida ku xusan Qodobka IX, bixinta waxbarashada ee sharciga cusub wuxuu uga baahan yahay dowladda inay machad ka dhigto waxbarashada nabadda dhammaan heerarka waxbarashada. [sii wad akhriska…]
Ugandha: Dowladdu waxay ku soo bandhigeysaa Dugsiyada Dugsiyada Barashada Nabadda
October 6, 2016 Warar & Muuqaal 2
Wasaaradda waxbarashada ee dalka Ugandha ayaa bilawday inay bilawdo barashada nabada iyo deegaanka ee dugsiyada sare ee dalka. [sii wad akhriska…]